အဘိဓါန် Mandarin- ထားတဲ့ IM Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဘိဓါန် Mandarin- ထားတဲ့ IM
အဘိဓါန် Mandarin- ထားတဲ့ IM APK ကို
အဘိဓါန် Mandarin- ထားတဲ့ IM
အဘိဓါန် Mandarin- ထားတဲ့ IM - ထို ICQ အပေါ်ဆကျသှယျဖို့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဂလိုင်းတခုဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင်သင်အွန်လိုင်း 24 နာရီတစ်ရက်ဖြစ်နိုငျသညျ, အဘိဓါန် Mandarin- သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုစားသုံးမဟုတ်, မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိကယ်နှုတ်သောနောက်ခံမှာကိုယ်နှိုက်ကို run ပါလိမ့်မယ်။
ဆက်သွယ်ရေးဒီတော့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖူးပါ။ ယခုသင်အဘယ်သူမျှမ network ကိုလည်းမရှိလျှင်ပင်, ဗီဒီယို, ဓာတ်ပုံများပေးပို့, မိတ်ဆွေများထံသို့စာများရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အဘိဓါန် Mandarin- ကိုယ်တော်တိုင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသူတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ယက်ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မေ့လျော့ - ချကွန်ယက်လျှင်အဘိဓါန် Mandarin- ပြည်နယ်ကယ်တင်တော်မူ၏, လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏လုပ်ရပ်များဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ကွန်ယက်မရရှိနိုင်သောအခါကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။
ရယ်စရာရုပ်ပြောင်နှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးပိုပြီးပျော်စရာစေမည်!
TomClaw ဆော့ဝဲ: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
တရုတ်ကိုလေ့လာပါ - ...
VoiceTra (အသံ ...